दाङका सबै क्षेत्रमा बाम गठवन्धनको... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
दाङका सबै क्षेत्रमा बाम गठवन्धनको अग्रता
नारायण खड्का, दाङ, मंसिर २२
दाङमा दीपक गिरीलाई हिराचन्द्र केसीले उछिने
पछिल्लो परिणाम अनुसार दाङका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाम गठवन्धनका उम्मेदवारले अग्रता हासिल गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङको क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दीपक गिरीलाई बाम गठवन्धनका उम्मेदवार एवं एमाले नेता हिराचन्द्र केसीले उछिनेका छन्।
सुरूवातमा पूर्व सिँचाई मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गिरीले झिनो मतान्तरको अग्रता थियो। दाङमा गिरीको मात्रै कांग्रेसबाट अग्रता थियो। पछिल्लो परिणाम अनुसार एमालेका दाङ जिल्ला सचिव समेत रहेका केसीलाई १ हजार ६ सय ६२ मत प्राप्त हुँदा काँग्रेस नेता गिरीलाई १ हजार ५ सय २ मत प्राप्त भएको छ। कांग्रेसका गिरी केसीभन्दा १ सय ६० मत अन्तरले पछाडि परेका छन्।
त्यस्तै प्रदेशसभा २ मा नेकपा एमालेका उत्तरकुमार वलीलाई १ हजार ७ सय ८ मत प्राप्त हुँदा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार बुद्धिराम भण्डारीलाई १ हजार ३ सय २ मत प्राप्त भएको छ। वलीले हालसम्म भण्डारीलाई ४ सय ६ मतले पछि पारेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा महरा १००० मतले अगाडि
दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा बाम गठवन्धनका उम्मेदवार एवं माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा आफ्ना प्रतिपर्धी भन्दा १००० बढी मत अन्तरले अगाडि छन्। विना विभागीय मन्त्री तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री महरालाई ३ हजार २ सय २० मत प्राप्त हुँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार एवम् पूर्वसांसद राजु खनाललाई २ हजार १ सय ७७ मत प्राप्त भएको छ ।
सुरूदेखि नै अग्रता कायमै राखेका महरा पछिल्लो परिनाम अनुसार खनाल भन्दा १ हजार ४३ मतले अगाडि छन्। प्रदेशसभा १ मा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेलले पनि अग्रता बढाउँदै लगेका छन्।
कांग्रेसका उम्मेदवार कमल किशोर घिमिरेभन्दा पोख्रेलले १ हजार ७ सय २१ मत बढी प्राप्त गरेका छन् । एमालेका पोख्रेललाई ३ हजार ७ सय १७ मत प्राप्त हुँदा घिमिरेलाई १ हजार ९ सय ९६ मत प्राप्त भएको छ। दाङका तीन निर्वाचन क्षेत्र मध्य सबैमा बाम गठवन्धनका उम्मेदवारहरुले लिड गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४, ०४:५५:०४